Izidakamizwa "ACC" (powder) - Iziyalezo yokusetshenziswa
Imikhuhlane, ukukhwehlela, amakhala yisisu, ukucinana kwemigudu yokuphefumula ukuletha eziningi ngokuphazamiseka. Kuleli zinga, kunzima ukuqhuba ngokugcwele futhi wenze imisebenzi evamile. Ngokuvamile eyayisetshenziselwa ukunciphisa izimpawu izindlela ezicindezela ukubonakaliswa salezi zifo. Kodwa inkinga eyinhloko ekwelapheni engenhla ipheshana zokuphefumula - ezishukumisayo ka isikhwehlela khulula. Ukukhwehlela, thina ukuhlanza emaphashini, beshaya ekhaleni wakhe - ekhaleni. Kunalokho ngokuvamile kwenzeka, izinto ngaphansi elimazayo zanqwabelana umzimba, ingozi yezinkinga. Omunye izidakamizwa ezingasiza kule ndaba - powder "ACC". Kuvuselela ukukhiqizwa isikhwehlela, okuvumela zokudambisa izimpawu futhi kuvimbele ukuxakeka.
Izidakamizwa "ACC 100" (powder), isiqinisekiso bhukwana igama lesiLatini elisho "ACC".
Isikali ifomu - powder esetshenziselwa ukwenza ikhambi iqondiswa ngomlomo. Kuphekhi ngamunye yakhiwa ezimbili izingcezu angu-100 noma angu-200 (ngokulandelana, "ACC 100" ukwakhiwa kanye "ACC 200").
FarmGruppa - expectorant, ejenti mucolytic. Evuselela nemisebenzi ipheshana zokuphefumula futhi Sekretolitiki.
Ukwakheka - 100/200 mg acetylcysteine. izinto engeziwe - saccharin, uvithamini C (askorbinka), ukunambitheka, sucrose. Omunye iphakethe iqukethe izidakamizwa isinkwa amayunithi - 0.24.
Ukulungiselela "ACC" (powder). Futhi imiyalelo ukusetshenziswa: Ukufundwa
Umuthi isetshenziselwa izifo ezihlukahlukene, ezithinta ipheshana zokuphefumula, kwakheka ngenxa isikhwehlela viscous okuyinto. Ziyakwazi:
oyingozi noma ezingamahlalakhona ukucinana kwemigudu yokuphefumula,
oyingozi noma ezingamahlalakhona sinusitis;
maphakathi nendlebe ukuvuvukala (otitis abezindaba);
Noma yimuphi ukukhwehlela ne expectoration nzima.
Ukulungiselela "ACC" (powder). Futhi imiyalelo ukusetshenziswa: Isikali
Izingane Ezisathomba engaphezu kwengu-14 ubudala kanye nabantu abadala bathathe 400-600 angu ngosuku izingane kusukela eminyakeni eyisithupha kuya 14 ubudala - kusuka 300 kuya 400 angu, amabili kuya eminyakeni emihlanu - 200-300 mg, kusukela ezinsukwini kweziyishumi kuya eminyakeni emibili - 100 -150 angu. I umthamo wansuku zonke kumele ihlukaniswe ngemithamo ezimbili noma ezintathu.
Lapho isifo cystic fibrosis umthamo esinqunyiweyo; izingane ezingaphansi kweminyaka emibili - 100-150 mg usuku, neminyaka emibili kuya kwemihlanu - angu-400, ingane abaneminyaka engama eziyisithupha - 600 angu. I umthamo wansuku zonke sehlukaniswe ngemithamo ezimbili noma ezintathu. Uma isisindo sengane idlula 30 kg, kungenzeka ukwandisa umthamo kuya 800 mg usuku olulodwa.
Umuthi esithathwayo ngemva kokudla. A luyibhuqu lwezinyawo sachet ziyoncibilika ingilazi yamanzi noma isiphuzo sezithelo. Endabeni izifo sibi kungukuthi ephelezelwa yezinkinga, umuthi ingathatha izinsuku ezingu-eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa. Ngo izifo ezingamahlalakhona Yiqiniso Ukwelapha ithatha izinyanga ezingaba yisithupha.
Ukulungiselela "ACC" (powder). Futhi imiyalelo ukusetshenziswa: Izimo
Umuthi akuyona esimisiwe,
ukuzwela kunoma izingxenye powder;
Ukulungiselela "ACC" (powder). Futhi imiyalelo ukusetshenziswa: side effects
Leli thuluzi libhekene tolerability ezinhle. Izimpawu ezilandelayo kungenzeka ezimweni ezingajwayelekile:
e pischevaritelnaoy uhlelo - isicanucanu, stomatitis, ukuhlanza, isilungulela, isifo sohudo,
CNS - tinnitus noma ikhanda;
e esimiso senhliziyo nemithambo yegazi - palpitations inhliziyo, hypotension;
komzimba - amawala, isikhumba silume, bronchospasm.
Ukulungiselela "ACC" (powder). Futhi imiyalelo ukusetshenziswa: imiyalelo ezikhethekile
Ngesikhathi lactation noma ekhulelwe, izidakamizwa isetshenziswa kuphela uma kunesidingo futhi udokotela.
Izingane ezingaphansi konyaka izimali esiqokiwe ngenxa yezizathu zempilo kuphela. Ukwelashwa kufanele kube ngaphansi kokuqondisa onguchwepheshe.
Izingane ezingaphansi kweminyaka emibili izidakamizwa iqondiswa kuphela ngaphansi kokuqondisa kukadokotela.
Ukwambula akunamthelela zomuthi ku izinga ukusabela lapho ushayela imoto noma yimuphi omunye usebenza ngomshini.
Probiotic "Saccharomyces boulardii": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka kanye nokubuyekeza
"Nalbuphine": imfundo, incazelo, ukwakheka, ukubuyekezwa
I-Meiosis ne-mitosis: umehluko omkhulu
Sezinyawo White umntwana omncane
Mackerel: izakhiwo ewusizo kanye contraindications
I-Bircus bears: incazelo, indawo yokuhlala kanye nokudla
Umfutho wegazi ophakeme amadoda: Ubangela, izimpawu. Kuthiwani uma umfutho wegazi ophakeme?
Squats - inzuzo ukuze sibalo noma ukulimala?